Warshadda Alaabta | Soo -saareyaasha Alaabada Shiinaha iyo Alaab -qeybiyeyaasha
tayo sare leh maalin walba Brillian ...
qiimaha ugu fiican ee perlite filter a ...
Nin budo ah oo la balaariyay ...
macdanta perlite ee warshadaha ee ...
ugu fiican Perli Hydrophobic Perli ...
1.6 ~ 2.5mm Qaab dhismeedka kiimikada Zeolite 3a 4a 5a, kiimikada, iyo adeegsiga
Jeermiska molecular Zeolite waa nooc ka mid ah maaddooyinka xayeysiiska ama filimka leh makarafoono isku mid ah, oo inta badan ka kooban silikon, aluminium, oksijiin iyo qaar kale oo bir ah. Cabbirka daloolkiisu wuxuu u dhigmaa cabbirka moodeelka guud, oo maaddooyinka kala duwan ee dareeraha ah ayaa la siidaayaa iyada oo la raacayo cabbirka daloolka ee waxtarka leh. Shaandhada molecular Zeolite waxaa loola jeedaa kuwa aluminosilicates crystalline crystalline oo dabiici ah iyo kuwa dardaro leh oo leh shaqo shaandheyn molecular. Shaandhada molecular Zeolite waxay noqotay maaddo madaxbannaan iyada oo ay ugu wacan tahay qaab -dhismeedkeeda iyo waxqabadkeeda gaarka ah. Codsiga shaandhada molecular zeolite wuxuu ku faafay warshadaha batroolka, ilaalinta deegaanka, injineernimada bayoolojiga, warshadaha cuntada, warshadaha dawooyinka iyo kiimikada iyo beeraha kale. Iyada oo la horumarinayo warshado kala duwan oo ku jira dhaqaalaha qaranka, rajada dalabka ee shaandhooyinka molecular zeolite ayaa noqday mid sii kordheysa.
budada Zeolite ee ugu fiican dhirta qiimaha jumlada
Budada Zeolite waxay ka samaysan tahay dhagax dhagax dabiici ah oo dabiici ah, midabkiisuna waa cagaar iyo caddaan khafiif ah. Waxay ka saari kartaa 95% nitrogen ammonia ee biyaha ku jira, waxay nadiifin doontaa tayada biyaha waxayna yareyn kartaa ifafaalaha wareejinta biyaha.
macdanta zeolite dabiiciga ah ee soo saarayaasha Daaweynta Biyaha ee Shiinaha
Zeolite waa macdan, oo markii ugu horreysay la helay 1756. Khabiirka macdanta Sweden Iswiidel Fredrik Cronstedt wuxuu ogaaday in uu jiro nooc ka mid ah macdanta aluminosilicate dabiiciga ah oo soobaxa marka la gubo, sidaa darteed waxay ugu magac dartay “zeolite” (zeolit ​​Swedish). "Dhagax" (lithos) oo macnaheedu yahay "karkarin" (zeo) oo Giriig ah. Tan iyo markaas, cilmi -baarista dadka ee zeolite ayaa sii waday inay sii qoto dheerto.
Dabiiciga Zeolite ayaa shaandhaynaya qiimaha daaweynta biyaha ee warbaahinta
Warbaahinta shaandhada Zeolite waxay ka samaysan tahay macdan zeolite tayo sare leh, oo la sifeeyay oo granulated. Waxay leedahay shaqooyinka xayeysiinta, sifeynta iyo deodorization. Waxaa loo isticmaali karaa sidii sifeeye tayo sare leh iyo xambaarsan xayeysiis, iwm, waxaana si weyn loogu adeegsadaa daaweynta webiga, dhulka qoyan ee la dhisay, daaweynta bullaacadaha, biyo-biyoodka.
Jawi bey'adeed bey'ada u leh bay'ada dabiiciga ah oo leh dul -marin aad u fiican
Lebiska la isku dhex mari karo ee deegaanka Zeolite waa nooc cusub oo alaab dhisme ah oo lagu farsameeyo daaweynta gaarka ah ee zeolite sida alaabta ceeriin ah. Lebiska bey'ada leh ee deegaanka ee Zeolite wuxuu si buuxda u xalliyaa dhibaatooyinka ka-soo-baxa, iska-caabbinta dhalaaleynta, foorarsiga iyo xoogga cadaadiska ee lebenkii caadiga ahaa ee la marin karo, wuxuuna leeyahay qaab-dhismeed khafiif ah oo aan lahayn qaab-dhismeed. , Badbaadinta tamarta, ilaalinta deegaanka, dayactirka sahlan, aashitada xooggan iyo iska caabbinta alkali, cimri dherer, is -waafajin juquraafi iyo cimiladeed oo ballaaran, iyo shaqooyin gaar ah oo lebenkii caadiga ahaa ee la dhex mari lahaa aysan yeelan karin.
Xoolaha Zeolite Feed Fasalka Powder lagu daro dhammaan xoolaha
Budada Zeolite waa badeeco budo ah oo lagu helay shiidi iyo baaritaanka zeolite dabiiciga ah. Ma aha oo kaliya in si weyn looga isticmaalo warshadaha dhismaha, laakiin sidoo kale waxay leedahay tabarucyo badan xagga warshadaha xoolaha iyo digaagga. Zeolite dabiici ah waa aluminosilicate biyo ah oo biraha alkali iyo biraha dhulka alkaline, iyo qaybtiisa ugu weyn waa alumina. Heerka Feedhka Zeolite wuxuu leeyahay xayeysiisyo xayeysiis ah oo xul ah, guryaha sarrifka ion -ka la beddeli karo, guryaha kataliska, iska -caabbinta kuleylka wanaagsan iyo iska caabbinta aashitada.
Bacriminta Zeolite Qalabka qaboojiyaha ciidda Zeolite ee Ciidda & Cawska
qaboojiyaha ciidda zeolite waa qaboojiye hagaajin ciidda oo shaqeynaya oo laga diyaariyey zeolite dabiici ah. qaboojiyaha ciidda zeolite waxaa lagu daray zeolite dabiici ah iyada oo loo marayo geedi socod gaar ah, kaas oo si buuxda u kicinaya sifooyinka iyo shaqooyinka gaarka ah ee zeolite dabiiciga ah, oo saamayn gaar ah ku leh ciidda cufan, ciidda labaad ee cusbada leh, ciidda ay wasakheeyeen biraha culus, iyo goobaha faddaraynta shucaaca leh. Isticmaalka tiknoolajiyadda zeolite si loo hirgeliyo dib -u -hagaajinta ciidda, kharash yar, saamayn deg -deg ah, hagaajin jireed, iyo wasakhayn labaad.
Iibinta kulul Kubadda la ballaariyay oo la sifeeyay si loo iibiyo
Kubadda la ballaariyay oo la xaqiijiyay waxaa sabab u ah iftiiminta dushiisa si ay u samaysmaan xoog qayb gaar ah, sifooyinka jirka iyo kiimikada aad bay u deggan yihiin, gabowga iyo iska caabinta cimiladu waa xoog badan yihiin, waxayna leeyihiin dahaarka kulaylka oo aad u fiican, ilaalinta dabka iyo sifooyinka nuugista codka. Waxay ku habboon yihiin isku -darka buuxinta iftiinka iyo dahaarka kuleylka iyo ka -hortagga dabka meelo badan. Materials Qalabka nuugista iyo kuleylka kuleylka. Warshadaha qalabka dhismaha, iyadoo la adeegsanayo kubbadda la ballaariyey oo la dhalaaliyey marka la isu geeyo culeysyada khafiifka ah waxay hagaajin karaan dheecaanka iyo iska-caabbinta hoobiyaha, waxay yareyn karaan dhumucda alaabta, hagaajin karaan waxqabadka guud ee badeecada, waxayna yareeyaan guud ahaan qiimaha wax-soo-saarka.
HGM Hollow Glass Microspheres soo -saareyaasha kuleylka kuleylka
Mikrospheres-ka dhalada ee godan ayaa ka muuqda cad-cad, kaas oo ah walxo budo dabacsan oo dheecaan fiican leh. Sifooyinku waa: dahaadhka dhawaaqa, dib -u -dhaca ololka, dahaarka korontada oo wanaagsan, cufnaanta hooseysa, nuugista saliidda oo yar, iyo xoog badan. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa daabacaadda khadadka, dhejiska, balaastikada injineernimada, caag wax laga beddelay, iyo qaybaha dahaarka korontada. Sababtoo ah wax -qabadkeeda deggan, iska -caabbinta cimilada oo wanaagsan, iyo qiimo jaban, ayaa si weyn loo adeegsaday.
Qaybaha ugu muhiimsan ee microspheres galaaska godan waa silicon dioxide-SiO2 iyo aluminium oxide-Al2O3 ka dib markii la eryay oo lagu kala saaray heerkul sare oo ah 1400°C. Dhexroorka microspheres galaaska godan wuxuu u dhexeeyaa 5 ilaa 1000 microns.
Powder Ceramic oo lagu daro rinjiga iibka
Budada dhoobada ayaa ah walxo badan oo aan macdan ahayn oo macdan ah. Qaybaha ugu muhiimsan waa SiO2 iyo Al2O3. Budada dhoobada waxay leedahay kala firdhin wanaagsan, awood qarsoon oo sare, caddaan sare, ganaax wanaagsan, xasilooni kiimiko oo wanaagsan, baaxad wanaagsan, heerkulka kulaylka u adkaysta, iyo cufnaanta sare. Wax yar, lumis yar oo dabka ah, firdhinta iftiin wanaagsan iyo dahaar wanaagsan. Waxay hagaajin kartaa xayeysiinta, iska caabbinta cimilada, cimri dhererka, xoqidda iska caabbinta, iska caabinta daxalka iyo iska caabbinta heerkulka sare ee rinjiga, hagaajinta sifooyinka farsamada ee filimka rinjiga, kordhiso daahfurnaanta, iyo hagaajinta iska caabbinta dabka. Waxaa loo isticmaali karaa ka hortagga dabaysha, iska caabbinta dabka, iska caabbinta heerkulka sare, budada, dahaarka dhismaha iyo noocyada kala duwan ee warshadaha iyo kuwa madani ah waxay si gaar ah ugu habboon yihiin dahaadhka dhaldhalaalka badan ee dhalaalaya iyo dareeraha kale. Waxay beddeli karaan xaddiga titanium dioxide, waxay tirtiri karaan ifafaalaha sawir-qaadista ee ay keentay isticmaalka titanium dioxide, waxay ka hortagtaa jaalaha ah ee rinjiga, waxayna yareyn kartaa qiimaha wax-soo-saarka ee shirkadda. Budada dhoobada waxaa loo yaqaanaa “wax cusub oo ku jira da'da bannaan
Badeecadda budada budada ah ee duleelka ah ee sahayda walxaha cenosphere
cenosphere fly ash waa nooc ka mid ah kubbadda godan oo dambas ah oo dul sabayn karta biyaha dushiisa. cenosphere ash dambasku waa caddaan, oo leh darbiyo dhuuban oo godan, culeys aad u yar, 160-400 kg/m3, cabbirka walxaha qiyaastii ah 0.1-0.5 mm, oo dusha ayaa xiran oo siman. Conductivity kaamerada hooseeyo, refractoriness ≥1610 ℃, waa wax aad u fiican dahaarka kaamerada refractory, si weyn loo isticmaalo wax soo saarka ee castables khafiif ah iyo qoditaanka saliid. Halabuurka kiimikada ee dambas dambas ayaa ah inta badan silica iyo xabagta aluminium. Waxay leedahay sifooyin badan sida walxaha ganaaxa, godan, miisaanka fudud, xoog sare, xirashada iska caabbinta, iska caabbinta heerkulka sare, dahaarka kaamerada, dahaarka iyo dab ololka.
Isku -darka hoobiye nuurad malaas nuurad ah oo fudud
Madaafiicda nuuradda nuuradda ee khafiifka ah waa qalab budo qallalan ah oo ay shirkadeenu isticmaasho budada gypsum desulfurized calcined oo tayo sare leh, microbeads la qalajiyey iyo isku-darka la soo waariday si loogu qaso qaddar go'an. Badeecaddan waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa in lagu simo derbiyada gudaha iyo saqafyada mashaariicda dhismaha ee dhammaadka ah. Waa wax -soo -saar cusub, bay’ada u fiican oo dhaqaale ahaan dalku kor u qaaday halkii laga samayn lahaa hoobiye sibidh. Ma aha oo kaliya inuu leeyahay xoogga sibidhka, laakiin sidoo kale waa ka caafimaad iyo bey'ad ahaan saaxiibtinimo ka fiican sibidh, waarta oo waarta, oo leh adhesion xoog leh, ma fududa in la rujiyo, dildillaacdo, godan, oo aan dhicin. Budada iyo faa'iidooyinka kale, fududahay in la isticmaalo iyo kharash-badbaadinta. Marka la eego qiimaha halbeegga, hoobiye malaastiisu way ka qaalisan tahay madaafiicda sibidhka, laakiin hoobiye malaasta ayaa leh faa'iidooyin badan. Isku soo wada duuboo, qiimaha balaastikada halkii mitir oo labajibbaaran ee hoobiye gypsum ah ayaa ka hooseeya hoobiye sibidh.